Tag: martida | Martech Zone
Dubitaanka "Sirdoonka" Ololaha Wada-U-Webka
Talaado, Maarso 21, 2017 George Leon
Ololaha casriga ah ee "wadista shabakadda" ayaa aad uga badan sidii si fudud loogu riixayo macaamiisha bog degitaan lala xiriirinayo Waa ka faa'iideysiga tiknoolajiyada iyo softiweerka suuq geynta oo waligeed isbedelaya, iyo fahamka sida loo abuuro ololeyaal firfircoon oo shaqsiyeed oo soo saara natiijooyinka webka. Isbeddel Feejignaan Faa'iido ay hay'ad horumarsan sida Hawthorne haysato ayaa ah awoodda lagu eegi karo oo keliya falanqaynta, laakiin sidoo kale in la tixgeliyo khibradda guud ee adeegsadaha iyo ka-qaybgalka. Kani waa
Sabtida, Janaayo 2, 2016 Axad, Janaayo 3, 2016 Douglas Karr
Wow, maxaa sanad ah! Dad badan ayaa laga yaabaa inay eegaan tirooyinkayaga oo ay ku jawaabaan meh… laakiin kuma faraxsanaan karno horumarka goobta ay ku tallaabsatay sanadkii la soo dhaafay. Naqshadeynta, dareenka ku kordhay tayada boostada, waqtiga ku qaatay cilmi baarista, dhammaantood wax weyn ayey iska bixinayaan. Dhamaanteen waan sameynay anaga oo aan kordhin miisaaniyadeena isla markaana aan iibsanin wax taraafiko ah… tani waa koritaanka dabiiciga ah! Ka dhaafida fadhiyada ilaha spam gudbinta, halkan waa tan
14 Shuruudaha Kaladuwan ee Loo Adeegsaday Sifooyinka Is-gaarsiinta Suuqgeynta
Ma hubo sababta ay suuqleydu had iyo jeer u dareemaan inay ku qasban yihiin inay ereygooda u sameeyaan wax walba… laakiin annagaa sidaas yeelnaa. In kasta oo aaladaha otomaatigga ee suuqgeynta ay leeyihiin astaamo si caddaalad ah isula jaan qaada, mid kasta oo ka mid ah bixiyeyaasha otomaatigga suuqgeynta ugu caansan waxay ugu yeeraan qaab kasta wax ka duwan. Haddii aad qiimeyneyso meheradaha, tani waxay noqon kartaa mid jahwareer leh markaad fiiriso astaamaha midba midka kale marka si daacadnimo leh, dhammaan qaababka isku midka ah ayaa jira. Mararka qaarkood, waxay u egtahay sida